Khwehlela - kuyingxenye ebalulekile cishe zonke imikhuhlane. Kodwa lapho engena ezimpilweni zethu, futhi ikakhulukazi ekuphileni kwezingane zethu, sifuna ngokushesha ayibulale, ngisho azi ukuthi ukubukeka kwakhe uhlobo yokusabela ukuzivikela umzimba.
Akekho ongalichaza ukuthola umuntu uye agule ukukhwehlela. Lokhu akusona isimanga, ngoba, eqinisweni, yilokho ukukhwehlela zemvelo, esisemthethweni impendulo okuvikela umzimba ezivukayo ngenxa ezenzeka ngaphandle kwi yasenhla nemithombo yasenzansi ipheshana zokuphefumula mucosal receptor. Njengoba ezenzeka ngaphandle kungenzeka ejenti ehlukile noma angaphandle Lokudabuka viral ezithathelwanayo (agent causative of pertussis noma umkhuhlane virus) noma microparticles kwemvelo ehlukahlukene (uthuli). Ezinganeni, kukhwehlela ngokuvamile kwenzeka ngemva kokugula viral, ezinjengomkhuhlane - ezimweni eziningi kuyinqubo engokwemvelo okungukuthi asalile. Kodwa ngezinye izikhathi khona ukukhwehlela in ingane kubonisa ukuthi kwakunamathuba eziyingozi ezithathelwanayo njengenkinga ngenxa izivikeli mzimba zibe buthaka.
Kuze kube manje, ihlukanisa ezimbili izinhlobo ukukhwehlela:
Dry - kabuhlungu esilazayo ifomu ukukhwehlela uhlamvu ikakhulu paroxysmal, kuyinto ukusabela komzimba ukuze umthelela ejenti angaphandle phezu avuvukele umgudu mucosa. Khwehlela kuhambisana ngokuyinhloko ubuhlungu sternum futhi intercostal imisipha spasm. Lolu hlobo ukukhwehlela kuyisici sobuntu esigabeni sokuqala lesi sifo.
Wet - lolu hlobo ukukhwehlela elivelayo emva ezomile. It libhekene uketshezi ngokweqile isikhwehlela ukuthi expectorated isikhwehlela ngombala ohlukile futhi ukuthungwa, ngaleyo ndlela bazilethela impumuzo ngabanye yesikhashana.
Khwehlela okungenhla kumane izinhlobo ngokuvamile kulekelelwa izici ezithile kanye nemingcele - kwesifuba, amakhwela noma umoya endala.
In izifo ezihlukahlukene, izingane eziningi, kukhona khona ikhwela ikakhulukazi ngesikhathi ukuphefumula ngaphandle ukukhwehlela njengoba enjalo, kwaqhubeka kuwo ebusuku, kodwa musa ibakhathaze lubonakale. Uma ukukhwehlela is amakhwela ku ingane, lokho kungase kubonise ukuthi izinkinga zempilo ezingathí sina (isifuba somoya noma ifomu esicashile lomdlavuza).
Uma kukhona izimpawu ingane efana kungaba ucishe Cishe ukuphakamisa ukuthi wayenobuhlobo ukucinana kwemigudu yokuphefumula noma ukukhwehlela whooping. Enough ukukhwehlela ezimbi nge ikhwela ku ingane ivela ngesikhathi lapho uzama sengidonsa umoya. Esinye sezizathu kokuminyaka elingenhla ipheshana zokuphefumula esiningi isikhwehlela, futhi ngenxa yalokho, ukucasuka we-receptor EPITHELIAL elingenhla zokuphefumula ipheshana mucosa.
Ukukhwehlela nge ikhwela umntwana: Izimbangela
Imbangela njalo iningi kukhwehlela ingane ephelezelwa ethize isici ikhwela kukhona izifo ezifana ukucinana kwemigudu yokuphefumula obstructive, isifuba somoya (omsakazo iguliswa noma infective, pharyngitis, pertussis noma umkhuhlane). Ukukhwehlela kwenzeka lapho bronchi noma kuqhoqhoqho isiqala kakade buthelela isikhwehlela. Uma ukubukela ingane, kungenzeka ukunquma ngasiphi iphuzu ekuqongeleleni ngenhla. Lapho kuzalwa wezwa amakhwela ngesikhathi ugqozi, kungenzeka kakhulu Indlela ukuxhumana nomzimba angaphandle, futhi kungcono hhayi uyephuza umkhankaso kudokotela. Udokotela kufanele anqume uhlobo lesi sifo futhi ukuze afundise imininingwane sendlela yokuqhubeka.
Ukucinana kwemigudu yomoya emaphashini obstructive
Ukucinana kwemigudu yomoya emaphashini - kakhulu njalo ezenzeka zokuphefumula ipheshana izifo izingane ezineminyaka engu-2 kuya ku-7. Ngaphansi ukucinana kwemigudu yokuphefumula obstructive ehilela ukulahlekelwa umgudu mucosa, esehlisa permeability ze- bronchi, futhi ngenxa yalokho, kukhona nobunzima bokuphefumula. Uhlobo oluvame kakhulu ukuphinda, okuyinto inkinga yesifo ezibangelwa amagciwane. Ukucinana kwemigudu yomoya emaphashini Obstructive kwenzeka ikakhulukazi ku isizinda izifo ezibangelwa amagciwane (influenza virus, adenovirus), kodwa kukhona izimo ezingase zibangele isimiso we bronchioles ukufuduka in umzimba worm.
Sici uphawu Ukucinana kwemigudu yomoya emaphashini obstructive kuyinto isifuba esomile nge ikhwela umntwana, nge neziqubu Ukuphelelwa. Ikakhulukazi, kube nomsindo futhi kwesifuba lapho evelele izimpawu catarrhal (amakhala yisisu, umphimbo obuhlungu, ongaphakeme-ebangeni imfiva). Ngokuhamba kwesikhathi, ukukhwehlela uqala ukuhlaba kabuhlungu ezindlebeni, eqinile kanye kwesifuba. Kukhona inani elikhulu okwalandela expectoration viscous ka isikhwehlela.
Phatha ukucinana kwemigudu yokuphefumula obstructive ezinganeni Kunconywa izidakamizwa, isikhwehlela thinning nezidakamizwa expectorant. Elifanele ukusetshenziswa "Lasolvan" futhi "Ambroxol", ezithinta ukusebenza eqeda ukuvuvukala kanye mucolytic. Uma ingane yakho ine ukukhwehlela nge ikhwela, izinga lokushisa, ungalibali umkhankaso kudokotela. Musa self-medicate! Lokhu kungaba senze isimo sishube.
isifuba somoya bronchial
Ngale ndlela umntwana ukukhwehlela nge ikhwela ngaphandle lokushisa? Lokhu kungase kube uphawu lokungabi somoya. Lesi sifo kwenzeka cishe ngo-10% izingane. A kuqala for wezingane kuyinto uphethwe esifike ngesikhathi futhi elungile, kusukela izimpawu akuzona njalo ngokucacile futhi angase abe ukufana nezinye izifo ezithathelwanayo. Lesi sifo libhekene ekuhlaseleni Ukuphelelwa kule ngane, okungase ngokuvamile kwenzeka ebusuku, kuyilapho ingane kunzima ukuthatha ikhefu - sengathi nguye angafi. Kokuziklinya kuhambisana ukuhlaselwa okubuhlungu kwesifuba ukukhwehlela. Ngokwezibalo, asemasha abafana ogulayo eside, kodwa kakade entsheni begula futhi amantombazane nabafana.
Ukuvimbela ukukhwehlela nge ikhwela
Ukuvimbela kwesifuba ukukhwehlela ezinganeni, imithetho kwenhlanzeko kufanele ilandelwe. Nakuba nokugcina kwabo, siyoqhubeka ingane yilesi sifo esesabekayo futhi singathandeki.
Ukukhwehlela ehlulekile ukuvela futhi akazange bacale kutfutfukisa, kubalulekile ukugwema ukuthintana nezingane ogulayo ezithola umkhuhlane noma umkhuhlane. Kuyadingeka ukukholisa ingane ukuthi kubalulekile ngezikhathi ukugeza izandla zakho (ngaphambi kokudla, futhi ngemuva kokuqala amakilasi, futhi ngemva uhambo). Futhi into okuyiyona ebaluleke kakhulu ekusebenziseni njalo amanzi okuphuza (njengoba amanzi thins isikhwehlela futhi kusiza expectoration kakhulu). Uma ukulawula ingane bagcine imithetho yokuphepha, awokuthi ukuthi ngeke bagule, kodwa uma namanje ukukhwehlela wabanjwa ingane, akudingekile uyephuza Kulokhu, kutuswa ukuba zisebenze Uchwepheshe yezingane. Ngisho nalapho udokotela ehlola ingane futhi wenze ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe, ungaqala ukwelashwa.
Ukukhwehlela nge ikhwela umntwana: ikhambi
Uma ukhwehlela lamfica ingane ebusuku, kungenzeka ukuba lula ukuphila kwakhe, umane ngokushintsha isikhundla sokulala.
Phakathi ukwelashwa, ingane uzodinga ukudala izimo ukhululekile. Nakakhulu ukuthatha isiphuzo afudumele (noma kunjalo hhayi ashisayo), futhi kwaphela isikhathi esithile ukuba aphume aye emoyeni opholile (hhayi abandayo). Uma izinyane ekhononda of ukukhwehlela uhlala esezinhlungwini ezinzima ukuthi iqala ukusihlupha kuye okuningi, kufanele ngokushesha ukuya kudokotela. Uma ungaphenduki, ke kungenzeka khona uzobe ukuvuvukala emaphashini.
Futhi izindlela eziphumelelayo kukhona amakhambi bendabuko kanye ephefumula ekhaya. Abadala akufanele ezizosikhinyabeza ekwenziweni ingane massage esifubeni, kodwa ungakhohlwa ukuthi ufuna ukusebenzisa ezahlukene ukufudumala amafutha amafutha.
Ingane umoya amakhwela futhi ukhwehlela? Ukuze babhebhethekisa le ukuqhubeka kwesifo e ingane, indlela engcono kakhulu iwukuba iyasebenza kule onguchwepheshe. Kuyoba kutholakale imbangela yokushona ukukhwehlela kubangelwa amakhwela futhi into yokuqala ku ukulethwa ngqo ukuhlolwa okudingekayo. Kuphela ngemuva kokuqeda lezi zinyathelo, angasenza i ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe futhi ukukhetha izindlela futhi imithi oyinikiwe, okuyinto nakanjani zihlanganisa ephefumula, Iziphungo amakhambi nemithi ebalulekile.
Impilo ingane kufanele kuqashelwe ngokucophelela, ngoba umzimba somntwana usengozini yokuthola izifo ezihlukahlukene, ngakho ngaso sonke isikhathi kufanele afake isicelo izinyathelo zokuvimbela, phakathi lapho kukhona ukusetshenziswa Vitamin eziyinkimbinkimbi, izithelo, imifino, yebo, u-garlic. Naphezu kweqiniso lokuthi lena akuyona isidlo ozithandayo kakhulu ingane, lokhu zemifino iqukethe omningi amavithamini, ngakho indlela engcono kakhulu ukuqinisa amasosha omzimba wengane.
Herpes zangasese ngesikhathi sokukhulelwa - isifo esiyingozi
Isimungumungwane - Hlobo luni isifo? Izimpawu, ukwelashwa, imiphumela
Koenigsegg Agera: Ukucaciswa, ukubuyekezwa, intengo nezithombe
Ikhompyutha ebhodini - umsizi obalulekile emgwaqeni!